अक्षय कुमार र गोविन्दा कोरोना संक्रमित : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed अक्षय कुमार र गोविन्दा कोरोना संक्रमित
अक्षय कुमार र गोविन्दा कोरोना संक्रमित
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री अक्षय कुमार र गोविन्दा कोरोना सँक्रमित भएका छन् । यतीबेला नयाँ फिल्म राम सेतुको छायाँकनमा रहेका अक्षय कुमारलाई छायाँकनकै क्रममा ज्वरो आएपछि स्वाव परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ पाईएको हो ।
अभिनेता अक्षय कमारले ट्विट गदै आफु कोरोना पोजेटिभ भएको बताएका छन् । रिपोर्ट आए लगत्तै आईसोलेसनमा बसेका अभिनेता अक्षयले एक साता यता आफुसँग सम्पर्कमा आएकाहरुलाई कोरोना परिक्षण गर्न सुझाब दिएका छन् ।
यस्तै अर्का अभिनेता गोविन्दाको पनि कोरोना पोजेटिभ आएको छ । अभिनेता गोविन्दाले आफु कोरोना सँक्रमित भएको बताएका छन् । तर आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको कोरोना भने नेगेटिभ देखिएको पनि उनले बताएका छन् । पाँच दिन अघिमात्र अभिनेत्री आलिया भट्टलाई कोरोना देखिएको थियो । भारतमा कोरोना बढेसँगै त्यहाँका अभिनेता अभिनेत्री पनि कोरोना पोजेटिभको सिकार भईरहेका छन् ।
आमाको हत्या गरी छोराले गरे आत्महत्या
विराटनगर । मोरङ, बेलबारी नगरपालिकामा एक छोराले आमाको हत्या गरी आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार बेलबारी–४ काकुम बुधबारे बस्ने ५५...
काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल कलाको विकास र विस्तारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेकी जया शर्माको कला यात्राले दुई दशकको मार्ग पूरा गरेको छ ।...
हत्या र आत्महत्या पहिचान गर्ने तरिका
बिचार एजेन्सी - June 24, 2020 0
मृत्युका अधिकांश घटना विवादास्पद बन्दै आएका छन् । विपक्षी र रिसइबी परेकालाई फसाउने तथा आफन्त र पक्षलाई जोगाउने उद्देश्यमा आधारित राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिस्पार्धले...
Breaking News एजेन्सी - September 13, 2020 0
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रणबाट ९ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार ३ महिला र ६ जना पुरुष...
जंगलमा त्रिपालभित्र पहिरो पिडित
प्रदेश एजेन्सी - August 2, 2020 0
कालिकोट । बाढी र पहिरोबाट पिडित ३२ घरधुरि त्रिपालमा वस्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाको शान्नि त्रिवेणि गाउँपालिका वडा नं ६ पोरिबोनमा आएको भिषण...
बिचार एजेन्सी - September 29, 2020 0
Editor-Picks सुदीप अधिकारी - May 7, 2021 0
कोरोनाको नयाँ भेरियन्टसँगै थप जोखिमपूर्ण
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - May 23, 2021 0
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत र सावधानी गराउँदै गर्दा गाउँबाट बस रिजर्भ गर्दै बजार, सडक र राजधानीमा उतारियो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न जुलुस, भाषण, उद्घाटन,...
Breaking News एजेन्सी - November 8, 2020 0
सम्भावित सङ्क्रमितका नमूना लिन गएको निगमको जहाज धावनमार्गमा चिप्लियो
Breaking News एजेन्सी - March 28, 2020 0
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाई १२ जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावनमार्गमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको छ । कोभिड–१९ का सम्भावित...
अर्थ एजेन्सी - July 26, 2020 0
काठमाडौं । वर्षा र बाढीको बहाना बनाएर बिचौलियाले हरियो तरकारीको मूल्य सात दिनमै दोब्बर बढाएका छन् । किसानबाट प्रतिकिलो १५–२० रुपैयाँमा किनिएको तरकारी बिचौलियाले...
Uncategorized एजेन्सी - March 30, 2020 0
अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायको योगदान उच्च : गर्भनर
डा. प्रकाश बुढाथोकी - June 20, 2021